Waa kuwee arrimaha ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamo ammaameedka algorithm?
Haddii aad ka shaqeyneyso ganacsigaaga ganacsiga ee Amazon, waa inaad horey u soo saartaa fikradda asalka ah ee Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO). Waxa laga yaabaa inay u muuqato mid aan maskaxda lahayn, laakiin kasta oo ah raadiyaha weyn ee raadinta (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo, Bing, iwm. ) wuxuu leeyahay liis darajo gaar ah. Si kastaba ha noqotee, ganacsiyo badan oo online ah oo iibiya in ka badan weli kama warqabin jiritaanka dhabta ah ee Amazon darajo algorithm. Taasi waa sababta hoosta aan u socdo inaan ku tuso arrimo muhiim ah Amazon darajo algorithm ayaa ku qaylinaya, oo lagu taageeray waxyaabaha ugu muhiimsan ee liis garaynta alaabooyinkaaga ee qaybtaada. Habkaas, waxaad fahmi doontaa sida loo abuuro tayada tayada ee boggaaga alaabta. Ugu dambeyntii, si aad u hesho badeecad aad soo bandhigto on top of search of Amazon liiska ka mid ah waxyaabaha ugu-iibinta.
Calaamadaha SEO ee On Amazon Ranking Algorithm
Halkan waxaa ku qoran qodobbada aasaasiga ah ee laga helay boggaaga badeecada kaas oo go'aan ka gaara qiimeyntaada Amazon. Aqoonta oo dhan waxay kaa caawineysaa inaad fahamto waxa la samaynayo liiskaaga wax soo saarka ee ugu sareeya ee wax iibinta ah iyo muuqaalkaaga internetka oo kordhay shahaadada dhabta ah ee cusub.
Your title item waa qaybta ugu horeysa ee boggaaga Amazon ee soo saarta muhiimadda ugu muhiimsan ee SEO ah halkaas. Sida badan marka la eego mashiinnada raadinta caadiga ah, Amazon darajo algorithm ayaa si weyn u saameeya astaanta astaanta ugu muhiimsan. Habkaa, waxaad haysataa ilaa 500 oo erey oo aad ku talagashay inaad isticmaasho ereyada muhiimka ah ee ugu muhiimsan iyo raadinta muhiimka ah ee dheeraadka ah ee loogu talagalay raadinta ugu badan ee raadinta internetka ee halkaas ka jira.
Waa qaybta soo socota ee boggaaga badeecada ee lagu helay midigta hoose ee shayga. Inkasta oo aysan jirin caddayn rasmi ah oo lagu xaqiijinayo xaqiiqadan, laakiin dhibcooyinka xabsigu waxay saameyn weyn ku yeelan karaan horumarkaaga beddelaad. U adeega sida nadiifsan oo cad oo alaabtaada ah, dhibcaha feerka ayaa sidoo kale ah meel aad u wanaagsan oo lagu daro qaar ka mid ah keywords key bartilmaameedkaaga oo leh hantidaada iibinta dhinacyada ugu wanaagsan.
Qeybta ugu dambeysa ee boggaaga Amazon muuqaalka booqdaha waa sharaxaadada alaabta. Dhab ahaantii, waa nooc ka sii dheer oo liiska xabadaha. Maxaa ka sii badan - sida ku cad Amazon darajo algorithm, qaybtan waa farsamo ahaan aan loo baahnayn, ugu yaraan waayo-aragnimo user si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, haysashada sharaxaad sheyga oo buuxa ayaa weli ah mid aad muhiim u ah. Dabcan, haddii aad rabto inaad si fiican uga taxadartid Amazon.
Qeybtan ereyada keywords keywords iyo ereyada raadinta xaqiiqda lama arki karo booqdayaashaada. Laakiin qaybtan ayaa si gaar ah loogu talagalay in ay qaadato inta ka hartay erayada muhiimka ah ee muhiimka ah - kaliya ujeedooyinka dakhliga. Habkaa, xusuusnow in Amazon backend keywords waa meesha ugu fiican in la dhigo dhammaan ereyada bartilmaameedkaaga ee aan weli la meeleeyay cinwaanka alaabta ama sharaxaadda badeecada. MAybe waxaad heli doontaa fursad macquul ah oo aad ku soo noqotid wakhti yar oo aad dib u eegto si qayb ka mid ah keyword keywords ugu haboon si guul leh u beddelaysa kuwa wax yaqaanka yar ee mawduucaaga sheyga, sharaxa, ama liiska dhibcooyinka qodob Source .